Haddii uu tagay Cristiano Ronaldo, kumaa laadadka xorta ah u tuuri doona kooxda Real Madrid? – Gool FM
Haddii uu tagay Cristiano Ronaldo, kumaa laadadka xorta ah u tuuri doona kooxda Real Madrid?
(Madrid) 21 Luulyo 2018. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa isku dayi doonta inay noolaato Cristiano Ronaldo la’aantiis kaasoo ka tagay sagaal sano oo uu la joogay kaddib, kuna biiray naadiga Juventus ee Waddanka Talyaaniga.
Los Blancos waxa ay ku qasban tahay xitaa inay raadsato xiddig cusub oo kooxda u tuura laadadka xorta ah (free-kick), maadaama kabtanka Portugal ee CR7 uu ahaa laacibka inta badan u tuuri jiray kooxda laadadka xorta ah iyo gool ku laadyada.
Tan iyo 2009-kii markii Ronaldo uu ku soo biiray Real Madrid isaga ayaa u qaabilsanaa inuu u tuuro laadadka xorta ah iyo rigoorooyinka, balse hadda waa uu tagay bedelkiisana waa inuu macallinka cusub soo magacaabaa xiddig xilkaas lagu aamino.
Tan iyo xilli ciyaareedkii 2008-09 marka laga soo bilaabo Cristiano Ronaldo ayaa qaatay 72% laadadka xorta ah ee kooxda Real Madrid waxaana uu ku dhaliyey 33 gool, taasoo ka dhigan inay kuwo guuleystay ahaayeen laadadka xorta ah oo uu tuuray CR7.
Haddaba macallinka cusub ee kooxda Real Madrid Julen Lopetegui ayaa haatan haysta xiddigo badan oo ku wanaagsan tuurista laadadka xorta ah, isla markaana goolal u rogi kara.
Isco, Kroos, Asensio, Bale iyo Ramos kuwaas oo dhammaantood ku sugan kooxda Los Blancos waqtigan ayaa u sharraxan inay tuuraan laadadka xorta ah ee ay kooxdu hesho balse go’aanka soo xulashada waxaa leh macallin Julen Lopetegui.
Inter Milan oo ah kooxda ugu dhow ee ku guuleysan karta saxiixa Arturo Vidal
Yerry Mina oo go’aamiyay mustaqbalkiisa kooxda Barcelona